Permalink Reply by Min Htin Kyaw on June 6, 2011 at 17:21
Now,I realize why I have few choices for universities,I mean for good universities of good students,who have student manners....Although I could do well in the exam,I cant decide on what university I should attend.Because,what I prefer is now the one of spoilt students,which my parents cannot accept.....Now,I realize who is guilty for breaking my future.... Thank you.
Permalink Reply by Aung Soe Myint on June 11, 2011 at 11:58
that's absolutely right. This is rare post......
Permalink Reply by 0j4n9kp15hyfp on June 11, 2011 at 16:29
Permalink Reply by 0q8zl7197dp88 on June 11, 2011 at 16:30
This is the Greatest Education Plan ever in the world.
Permalink Reply by awwzar on June 11, 2011 at 16:40
ဒါပေမယ့်  သူတို့ကိုအပြစ်တင်လို့မရဘူး ဟ ကုသိုလ်ကံလို့သတ်မှတ်ပါ အဲဒါကအကုသိုလ်မဖြစ် ဘူးလေ ဟုတ်ဘူးလား
Permalink Reply by Khin Maung Lwin on June 16, 2011 at 10:42
That is absolutely right but we all have to be aware of that and try to overcome those barriers instead of following their shaping us.
Permalink Reply by 3hw4e2sp011l7 on June 16, 2011 at 11:06
ပညာရေးကို ဆိုးဝါးအောင် လုပ်တဲ့သူတွေကို လဲ သတ်ချင်နေတယ်
အာဏာ ရှင်တွေကလည်း ကောင်းကောင်းနေ ကောင်းကောင်းစား ရရင် ပြီးရောတဲ့
မြန်မာတိုးတက်အောင် လုပ်ပေးရင် သူတို့ဘာသာ နေချင်သလိုနေ ရတယ်
မြန်မာ တိုးတက်လေ ပြည်သူ ချမ်းသာမယ်.....သူတို့ စားပေါက် ချောင်မယ်......
Permalink Reply by nayaryoum on June 17, 2011 at 10:41
အလွန်မှန်ကန်ပြီး ရဲရင့်လှသောတင်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ဖက်အစိုးရအနေနဲ့လည်း ပညာရေးကိုချိနဲ့သွားအောင်လုပ်မယ်လို့ ရည်ရွယ်ရင်းရိုးရှိမယ် မထင်ပါဖူး။ သူတို့အာရုံထားခဲ့တာက.... ပြဿနာရှိတဲ့သူတွေကို တန်ပြန်ဖြိုခွင်းရေးအစီအစဉ်အနေနဲ့ စစ်ဖက်သေနင်္ဂဗျူဟာချပြီး စနစ်တကျသုတ် သင်ဖြိုခွဲတဲ့အခါမှာ သူတို့တွေအဓိကကျမယ်လို့ထင်မထားတဲ့ တကဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ရေသောက်မြစ်ဖြစ်တဲ့ ပညာရေးဟာ side effect တခုအနေနဲ့ ခံ စားခဲ့ရတယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ သူတို့စစ်သေနင်္ဂဗျူဟာတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေ အများကြီးရှိခဲ့မှာပါ။ ဒါတွေ အားလုံးဟာ နောက်ဆုံးရုပ်လုံးပေါ်လာတော့ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်၊ ကျွန်တော်တို့လူမျိုး၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေး။ ဒီပညာရေးနဲ့ လူဖြစ်လာကြတဲ့ နောက် Generation အဆက်ဆက်ဟာ ချိနဲ့ကျဆင်းနိမ့်ကျလာခဲ့တာ အခုလက်တွေ့ပါပဲ။ ဒီတော့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူတွေဟာ အင်မတန်မှ အရေးကြီး ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရဲ့နောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဘ၀တွေဟာ အကျိုးဆက်တွေ ဆိုးကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကောင်းကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်းပြည်ရဲ့အမွေအနေနဲ့ခံစားကြရမှာပါ။
Permalink Reply by Mu Ko San on June 17, 2011 at 15:22
ဟုတ်မမရေ ညီမလေးလည်းဖက်ပြီး တော်တော်စိက်မကောင်းဖြစ်မိတယ် ညီမလေးလည်း ဗဟူသူတနည်းလားမနည်းလား အခု မမရေးပြထားမှပဲသိရတာလေ ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်